Torpedo virus Juventus v Napoli - teles relay
Torpedo virus Juventus v Naples
Nikorontana ny lalao Serie A teo amin'i Juventus sy Napoli ny alahady teo satria tsy nipoitra ireo mpitsidika taorian'ny nametrahana ny ekipan'izy ireo taorian'ny fitiliana natao tamin'ny coronavirus.
Miaraka amin'ny valiny tsara miisa roa tamin'ity herinandro ity, nilaza i Napoli fa nasaina tsy nandeha tamin'ny alàlan'ny fahefana ara-pahasalamana eo an-toerana izy.
Na izany aza, nandà ny hampiala ny lalao i Serie A.
Tonga tany amin'ny kianja adiny iray ny ilan'ny Juventus alohan'ny nanombohana tamin'ny 19 hariva BST, saingy tsy nanana mpanohitra hatrehana.
Raha ny lalàna Serie A dia nitaky fandresena 3-0 i Juventus ho an'ny lalao Alahady.
Ny ligy dia nilaza fa ny Naples Health Authority (ASL) dia tsy nahomby tamin'ny fiheverana ny fomba fiasa ara-pahasalamana nifanarahan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fanatanjahantena sy ny tompon'andraikitra amin'ny baolina kitra.
Midika izany fa, raha mizaha toetra ny mpilalao tsara dia mbola afaka miofana sy milalao indray ny ekipa sisa raha mbola voasedra indray izy ireo ary mamerina valiny ratsy. Nanampy io fanambarana io fa lalao maromaro no efa natao tamin'ity vanim-potoana ity taorian'ny nanaovan'ny ekipa mpilalao iray na maromaro hita fa tsara.
"Mametraka fitsipika tsy azo foanana io protokol io, izay mamela ny lalao ligy alefa na dia misy valiny tsara aza, amin'ny alàlan'ny famoahana ireo mpilalao izay nanandrana ny ratsy," hoy izy.
L1: mpilalao tsara 11, nahemotra i Lens-Nantes! - FOOT 01
Krizy ara-pahasalamana: mpanazatra amin'ny fanaintainana lalina
Mitokona aloha ny Timbers, fehezin'i Sounders amin'ny fangalarana fotoana fijanonana…
Nilaza ny filoha Juventus Andrea Agnelli: “Mazava ny lalàna momba ny fanatanjahan-tena… ary milaza fa raha tsy miseho ny ekipa iray dia miatrika sazy famaizana. Hiresaka rahampitso ny mpitsara ara-panatanjahantena ary mifototra amin'ny fanapaha-keviny dia hisy eritreritra hafa.
“Miharihary fa ny tsy eken'ny ekipa ny kianja filalaovana lalao dia tsy manome endrika tsara ny baolina kitra italiana. "
Ny alahady lasa teo dia nampiantrano an'i Genoa i Naples, izay mpilalao 17 no nanaporofo fa tsara tamin'ny Covid-19 tamin'ny herinandro lasa teo. Nahemotra ny lalao an-trano Genoa mifanohitra amin'i Turin amin'ny asabotsy.
Nanapa-kevitra i Serie A fa ny lalao dia tokony hatao raha toa ka manana mpilalao 13 farafahakeliny ny ekipa tsirairay ary ho very maina ireo ekipa tsy afaka milalao.
Na izany aza, manan-jo hangataka fanemorana ny ekipa raha tsy forfeit raha mpilalao 10 no voan'ny herinandro.
Ao anaty 'bubble' ny ekipan'i Juventus amin'izao fotoana izao taorian'ny nanaporofoan'ny mpiasa roa tsy dia nilalao fa tsara ho an'ny Covid-19 niaraka tamin'i Aaron Ramsey fa tsy nihataka hiala tao amin'ny ekipa Wales izy ireo ho an'ny lalao namana any Angletera .
Tamin'ny sabotsy, miaraka amin'ny tatitra fa tsy handeha i Napoli, nisioka i Juventus fa handeha hiakatra an-tsaha ny ampitso "araka ny fandaharam-potoanan'ny ligy Serie A".
Nanaraka izy ireo tamin'ity alahady ity niaraka tamin'ny bitsika maro hafa, iray milaza fa “Matchday! Ary iray hafa mampiseho ny lisitra ekipany ho an'ny lalao.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/sport/football/54408861
bryanekobe 1570 Lahatsoratra 0 hevitra
An-jatony maro ireo voasambotra tamin'ny fanoherana an'i Lukashenko
Fepetra farany avo indrindra atolotry ny Repoblikan'i Irlandy
Mitokona aloha ny Timbers, fehezin'i Sounders amin'ny toerana mangalatra fotoana fijanonana, 1-1
Andres Flores dia mametraka an'i Tombers mialoha miaraka amin'ny tanjona voalohany ao anatin'ny roa taona, 1-0